Maika tsy navoaka: Departemantam-panjakana Amerikana momba ny Fandrahonana Rosia Okraina & Fanafihana UAE
Janoary 25, 2022 0 Namaky 55 aho
Fanambarana ho an'ny mpanao gazety ao amin'ny Departemantam-panjakana Amerikana, Alatsinainy 24 Janoary 2022,
Ned Price, mpitondra tenin'ny departemanta
Washington DC, 2 janoary 39 amin'ny 24:2022 hariva EST
MR PRICE: Salama. Alatsinainy sambatra. Tsara ny mahita ny rehetra. Singa iray fotsiny eo ambony dia horaisinay ny fanontanianao.
Melohin'i Etazonia ny fanafihana nandritry ny alina nataon'ny Houthi tao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra sy Arabia Saodita, izay niafara tamin'ny fandratrana sivily tao Arabia Saodita ary nanaraka ny fanafihana Houthi mitovy amin'izany tamin'ny herinandro lasa izay nahafaty sivily telo tao Abu Dhabi. Manamafy ny fanoloran-tenanay izahay hanampy amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny mpiara-miombon'antoka Saodiana sy Emirati.
Ireny fanafihana an'i Emirà Arabo Mitambatra sy Arabia Saodita ireny, ary koa ny fanafihana an'habakabaka vao haingana tany Yemen izay nahafaty sivily, dia maneho fisondrotry ny korontana izay vao mainka mampitombo ny fijalian'ny vahoaka Yemenita.
Miantso ny antoko rehetra amin'ny fifandonana izahay mba hanolo-tena amin'ny fampitsaharana ady, hanaja ny adidiny eo ambanin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny maha-olombelona, ​​anisan'izany ireo mifandraika amin'ny fiarovana ny sivily rehetra, ary handray anjara feno amin'ny dingana fandriampahalemana tarihin'ny Firenena Mikambana.
Mila vahaolana ara-diplaomatika amin'ny ady ny vahoaka Yemenita, vahaolana ara-diplaomatika izay manatsara ny fiainany ary mamela azy ireo hamaritra ny hoaviny manokana.
Miaraka amin'izany dia faly aho mamadika ny fanontanianao. Eny? Eny ary, hiverina any aho, araka ny nampanantenaiko. Mba miangavy re!
FANONTANIANA: (Tsy azo henoina) momba ity olana ity, noho izany -
MR PRICE: Okay. Mahafinaritra.
FANONTANIANA: Miaraha amiko, azafady. Ny fanafihan'ny Houthis androany an'i UAE no fanafihana fahatelo ambin'ny folo tao anatin'ny 10 andro farany. Haingana àry ireo fanafihana ireo tato ho ato. Ho hitantsika ankehitriny ve ny fanafainganana mitovy amin'ny fizotran'ny fandinihana nataon'ny Biden - nataon'ny fitantanan-draharaha mba hampidirana ny Houthis amin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro?
MR PRICE: Miala tsiny, izaho-
FANONTANIANA: Mba hampidirana azy ireo indray amin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro?
MR PRICE: Oh, mitanisa azy ireo.
FANONTANIANA: Ka ity fanafainganana ity dia hiteraka fanafainganana mitovy amin'ny fizotran'ny fandinihana izay nokarakarain'ny fitantanan'i Biden momba ny famerenana azy ireo amin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro?
MR PRICE: Noho izany ny fanontanianao dia momba ny satan'ny Houthis sy ny mety hanovana anarana. Araka ny fantatra dia niresaka izany ny Filoham-pirenena tamin’ny herinandro lasa teo, tamin’ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, ny alarobia lasa teo. Nilaza izy fa eo am-pandinihana ny fanontaniana momba ny fanovana anarana, ny mety hisian'ny fanavaozana ny Ansarallah, ny anaran'ny hetsika Houthi. Ary noho izany dia tsy afaka miresaka momba ny dingana mety hodinihina aho.
Izao anefa no holazaiko. Hanohy hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay any amin'ny faritra izahay, anisan'izany i Arabia Saodita sy UAE, mba hanampy azy ireo hiaro amin'ireo fanafihana Houthi mampalahelo ireo. Araka ny voalazan'ny angon-drakitra farany hitako, niaraka tamin'ny fanampian'i Etazonia, ny Fanjakan'i Arabia Saodita dia afaka nanakana ny 90 isan-jaton'ireo fanafihana tonga avy any Yemen, avy amin'ny Houthis. Mazava ho azy, ny tanjonay, ny tanjona iombonana, dia ho azo - ny hahazoana izany ho 100 isan-jato. Saingy mbola - hanohy hijoro amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'izany izahay.
Izahay koa, ary manana, dia manohy mitana ampamoaka amin'ireo mpitarika Houthi noho ity fitondran-tena mahamenatra ity. Namoaka sazy ho an'ireo mpitarika lehibe sy fanendrena ireo mpitarika lehibe izahay tato anatin'ny volana vitsivitsy. Ary hanohy hiantso ireo fitaovana mety rehetra ao amin'ny kitaponay izahay mba hitazomana ireo Houthis ireo, ireo mpitarika Houthi tompon'andraikitra amin'ireo fanafihana ireo. Tsy hilefitra izahay amin'ny fanendrena ireo mpitarika Houthi sy ireo sampana voarohirohy amin'ny fanafihana ara-miaramila izay manohintohina ny sivily sy ny fitoniana eo amin'ny faritra, ny fampitohizana ny fifandonana, ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​na ny fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena momba ny maha-olona, ​​na ny fanamafisan'ny krizy maha-olona tena lehibe amin'ny – araka ny ankamaroan'ny kaonty , no krizy maha-olona lalina indrindra eto ambonin'ny tany.
Saingy fiheverana sarotra izany, ary niresaka tamin'ity fandinihana ity izahay tamin'ny andro voalohan'ny fitantanana, tokony ho herintaona lasa izay, raha niresaka momba ny fanapahan-kevitra voalohany manoloana ny Houthis izahay satria tamin'ny fanaovana izany fanapahan-kevitra izany sy ny fahatongavana ho amin'izany. io fanapahan-kevitra tany am-boalohany io, dia nihaino ny mpandray anjara maromaro izahay. Nandre fampitandremana avy amin’ny ONU izahay. Nihaino ny fanahiana avy amin'ireo vondrona misahana ny maha-olona izahay. Nihaino ireo mpikambana ao amin'ny Kongresy roa tonta izay nanohitra ny fanapahan-kevitry ny fitondrana farany tamin'ny fanondroana ny Houthis ho fikambanana mpampihorohoro vahiny, avy eo STDT satria voalohany indrindra, io fanapahan-kevitra mifono lamba io dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahafahantsika manafaka sy manome izay tena ilaina. fanampiana maha-olona ho an'ny olom-pirenen'i Yemen.
Mety hisy fiantraikany amin'ny fidirana amin'ny entana fototra toy ny sakafo sy ny solika ihany koa izany. Ary noho izany dia henonay mafy sy mazava ireo ahiahy ireo, ary fantatray fa manodidina ny 90 isan-jaton'ny entana ilaina ao Yemen no nafaran'ny orinasa tsy miankina. Ary noho ny fitandremana be dia be, ireo mpamatsy ireo – ireo mpamatsy sy andrim-panjakana ireo dia mety hampitsahatra izany asa izany, izay zava-dehibe amin'ny filan'ny maha-olona ny vahoaka Yemenita.
Ka renay mafy sy mazava ireo ahiahy ireo. Mijery akaiky ny valin-teny mety izahay, fa ny mbola hataonay, tsy misy isalasalana momba izany, dia ny mijoro miaraka amin'ny Emira Arabo Mitambatra, miara-mijoro amin'i Arabia Saodita, ary manao ampamoaka ireo mpitarika Houthi tompon'andraikitra tamin'ireo fanafihana fampihorohoroana ireo.
FANONTANIANA: Eny, Ned, tohiny fotsiny, teboka roa hafa momba ity olana ity: Etazonia koa dia nilaza tamin'ny fanambarana teo aloha - avy amin'ny Departemantam-panjakana inoako, sy ny Trano Fotsy - fa hanohana an'i UAE amin'ny fiarovana ny faritaniny. Ahoana àry no hivelaran'io fanohanana io amin'ny lafiny azo ampiharina? Iray izany. Faharoa, hanampy amin'ny fandraràna ny fikorianan'ny fitaovam-piadiana sy ny fanohanana ara-bola ho an'ny Houthis ve i Etazonia, raha toa ka tohana sy tohanan'i Iran izy ireo?
MR PRICE: Noho izany, amin'ny fanontanianao voalohany, miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka Emirati izahay, toy ny ataonay amin'ireo mpiara-miombon'antoka Saodiana, mba hanomezana azy ireo izay ilainy mba hiarovana ny tenany amin'ireo karazana fanafihana ireo. Mbola hanao izany izahay. Hanohy hiara-hiasa amin'izy ireo amin'ny fomba samihafa izahay mba hanampiana azy ireo hanamafy orina ny tenany amin'ireo fanafihana ireo.
Ary ny fanontanianao faharoa momba ny -
FANONTANIANA: Eny. Hanampy amin'ny fandraràna ny fandefasana fitaovam-piadiana sy fanohanana ara-bola ho an'ny Houthis ve i Etazonia, raha toa ka tohanan'i Iran izy ireo?
MR PRICE: tanteraka. Ary efa niasa mafy tamin’izany izahay, tsy tamin’ity fitondrana ity ihany fa tamin’ny fitondrana nifandimby. Henonareo ny mpiara-miombon'antoka aminay ao amin'ny Departemantan'ny Fiarovana miresaka momba ny fisamborana an-dranomasina, ohatra, ny fitaovam-piadiana natao ho any Yemen sy ho an'ny Houthis. Hitanareo fa namirapiratra mazava ny haavon'ny fanohanana omen'i Iran sy ireo vondrona tohanan'i Iran ho an'ny Houthis. Henonao izahay niresaka momba ny anjara asan'ny fanakorontanana ataon'i Iran sy ireo mpisolovavany manerana ny faritra, ary azo antoka fa tafiditra ao Yemen izany, ary tafiditra ao anatin'izany ny fanohanan'i Iran ny hetsika Houthi ao Yemen.
FANONTANIANA: Ny fanontaniana dia hoe: Hatsahatra ve ny fikorianan'ny fitaovam-piadiana ara-batana? Ny tiako holazaina dia mandeha (tsy azo henoina) ve ny herin'ny fitaovam-piadiana? Ny tiako tenenina dia heveriko fa izay no fototry ny fanontaniana.
MR PRICE: Eny, ary ny valinteniko tamin'izany dia eny, hanohy hanao izay rehetra azontsika atao isika mba hampitsaharana ny fikorianan'ny fitaovam-piadiana, ny fanampiana, ny -
FANONTANIANA: Ka mety ho hitantsika, ohatra, ny fanafihana an'habakabaka amerikana mba hampitsaharana ny fikorianan'ny fitaovam-piadiana?
MR PRICE: Miala tsiny aho?
FANONTANIANA: Mety hahita fanafihana natao hampitsahatra ny fikorianan'ny fitaovam-piadiana ataon'ny tafika amerikana isika?
MR PRICE: Nahita hetsika tsy tapaka nataon'ny ampahan'ity fitantanan-draharaha ity sy ny fitondrana teo aloha ianao mba hampitsahatra ny fikorianan'ny fitaovam-piadiana, hampitsahatra ny fikorianan'ny famatsiana ho an'ny Houthi, ary azo antoka fa tafiditra ao anatin'izany ny zavatra nomen'ny Iraniana.
FANONTANIANA: Ned, any Rosia. Noho izany dia hisy -
FANONTANIANA: - antso miaraka amin'ny Eoropeana momba ny (tsy azo henoina) -
MR PRICE: Eny, miala tsiny, andao isika hanakatona – andao hanakatona an'i Yemen, ary avy eo dia ho tonga any Rosia.
FANONTANIANA: Ny Houthi dia nilaza fa ny tobin'ny fiaramanidina amerikana any UAE no lasibatra omaly, ary ny tafika amerikana dia nilaza fa nitifitra ny Tia Tanindrazana izay nanakana ny balafomangany. Hisy fanehoan-kevitra amerikana amin'ny Houthis ve, ary indrindra fa mikendry ny tafika amerikana any UAE izy ireo?
MR PRICE: Hanohy hitazona ny Houthi ho tompon'andraikitra amin'ireo fanafihana fampihorohoroana ireo izahay. Hanao izany amin'ny fomba samihafa isika. Efa nampiasa fitaovana maromaro izahay, ary miahiahy aho fa hahita anay hanohy hanao izany izahay amin'ny andro sy herinandro ho avy.
FANONTANIANA: Iray hafa ao Yemen.
MR PRICE: Azo antoka.
FANONTANIANA: Nahatratra fehin-kevitra hafa ve i Etazonia momba ny fiantraikan'ny fanaterana fanampiana amin'ny fanendrena iray? Ary raha tsy izany, nahoana no mampiala voly ilay hevitra?
MR PRICE: Eny ary, miara-miasa amin'ny sasany amin'ireo mpandray anjara nolazaiko teo aloha izahay mba hanohizana ny fihainoana ny fomba fijerin'izy ireo, mba hahazoana ny fomba fijeriny. Azo antoka fa mbola mihatra ihany ny sasany amin'ireo ahiahy henonay tamin'ny herintaona lasa izay. Ny fanontaniana dia ny hoe raha afaka isika - raha ho an'ny tombotsoan'i Etazonia ve ny fanovana anarana, ho tombontsoan'ny fiarovana antsika, ho tombontsoan'ny fiarovana ny mpiara-miombon'antoka amin'ny faritra, ary ho tombontsoan'ny firenena. mahita ny fiafaran'ny ady sy ny vonjy taitra maha-olona ao Yemen isika.
Noho izany dia sarotra izany – lafin-javatra sarotra no lanjainay, saingy araka ny nambaran'ny Filoha, dia mandinika izahay – mandinika ny fanapahan-kevitra izahay.
Misy zavatra hafa ve ao Yemen? Humeyra.
FANONTANIANA: Okay. Raiso roa. Ao Rosia, noho izany dia hisy ny antso amin'ny Eoropeana anio tolakandro miaraka amin'ny filoha Biden. Nanontany tena aho - nanontaniana tamin'ny lahateny tao amin'ny Trano Fotsy ihany koa izany, fa raha azonao atao ny manazava kely ny zavatra antenain'ny fitondrana ho tratrarina amin'ny alàlan'ity antso ity. Ary renay ny filoha Biden tamin'ny herinandro lasa teo dia niaiky ampahibemaso ny ratra tao amin'ny Alliance NATO ary koa tamin'ny Eoropeana momba ny fomba - ny fomba hamaliana. Nisy fihatsarana ve hatramin’izay teo amin’ny Eoropeanina? Moa ve ianao akaiky kokoa amin'ny pejy mitovy? Ary misy antony tokony hanantenanay ve fa aorian'ity antso ity dia hijery bebe kokoa amin'ny pejy iray ihany ianao momba ny fomba hamaliana ny fidiran'ny madinidinika, na ny firotsahana lehibe, na inona na inona?
MR PRICE: Okay. Humeyra, araka ny fantatrao, tany Eoropa izahay tamin'ny herinandro lasa. Tany Kiev izahay. Nankany Berlin izahay avy eo, izay ankoatra ny fihaonany tamin'ireo mpiara-dia aminay alemà dia nanana fahafahana nihaona tamin'ny antsoina hoe Quad Eoropeana ny Sekretera. Talohan'izay, tany Eorôpa izahay tamin'ny volana lasa izay nanananay fotoana nihaona tamin'ireo mpiara-dia amin'ny OTAN, miaraka amin'ny OSCE. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay, ny sekretera, ny sekretera lefitra, ny sekreteram-panjakana lefitra misahana ny raharaha politika, tsy lazaina intsony ny filoha sy ny mpanolotsaina momba ny fiarovam-pirenena ary ny maro hafa dia nitafa an-telefaonina tsy tapaka niaraka tamin'ny mpiara-miasa sy mpiara-miombon'antoka mba hiresaka momba ity herisetra Rosiana ity sy valiny.
Ary te-hametraka olana amin'ny fototry ny fanontanianao aho satria tao anatin'ireo fifampikasohana rehetra ireo - ny fifampiraharahana manokana, ny resaka, ny fihaonambe video - tamin'ny tsirairay amin'ireo fifampiraharahana ireo dia henonay, ary ianao kosa dia nandre. tsy avy aminay ihany fa avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka Eoropeana sy mpiara-miombon'antoka aminay, mpiara-miombon'antoka tsirairay, OTAN, OSCE, G7, Vondrona Eoropeana, Filankevitra Eoropeana – efa naheno hafatra mitovy amin'izany koa ianareo: Raha misy hery Rosiana mivezivezy manerana ny sisintany, dia havaozina izany. fanafihana; ho valin-kafatra haingana sy henjana ary miray hina avy amin’i Etazonia sy ireo mpiara-dia amintsika no hitsena azy.
Ka tsy misy manjavozavo momba izany. Tsy misy ambiguity. Tsy misy masoandro. Fantatray izany. Ary ny tena zava-dehibe dia fantatry ny Federasiona Rosiana izany.
FANONTANIANA: marina. Koa ny - okay, misaotra. Somary kely ny andro, fa tsy hampiala voly izany ela loatra aho. Izaho dia – Manontany tena aho, afaka manome fanazavana kely ve ianareo momba izay tianareo hotratrarina amin'ity fihaonana manokana ity? Ary avy eo dia handeha amin'ny tsy taratasy aho.
MR PRICE: Eny ary, avelao aho hiverina amin'ny teny manjavozavo nataonao – ary angamba natao ho teny manjavozavo fotsiny izany, saingy tsy afaka nanohitra aho.
FANONTANIANA: Tsia, ny tiako tenenina dia ny Filoha no nilaza fa misy ny tsy fitovian-kevitra, ary efa niainantsika izany. Efa nahita izay—
MR PRICE: Ny henonao avy amin'ny Filoha, ny henonao avy amin'ny Sekretera, ny henonao avy amin'ny mpanolotsaina momba ny fiarovam-pirenena, ny henonao avy amin'ny hafa dia ny hoe raha misy ny fanafihana Rosiana amin'i Okraina dia hisy ny valiny. Haingana izany; ho mafy izany. Raha sanatria misy ny fidiran’ny fokonolona dia tsy mbola nisy toy izany raha ny dingana efa nomaninay.
Ary azonao atao ny milaza fa misy ny andro, fa manantena aho fa hijery sy hihaino ireo fanambarana avy amin'ny renivohitra Eoropeana ihany koa ianao, ny fanambarana avy amin'ny OTAN, avy amin'ny OSCE, avy amin'ny G7, avy amin'ny Vaomiera Eoropeana, avy any Etazonia, avy amin'ireo mpiara-dia aminay mijoro eo akaikin'ny Sekretera Blinken, na Minisitry ny Raharaham-bahiny Baerbock izany, na mpiara-dia sy mpiara-miombon'antoka hafa nihaona taminay tato anatin'ny herinandro vitsivitsy sy tao anatin'ny roa volana lasa.
Noho izany dia azo atao ny milaza fa misy ny andro; saingy azo antoka fa raha jerena ny hamaroan'ny feo sy ny fitaovana izay misongadina ao anatin'ny firaketana an-tsoratra ho an'ny daholobe, dia heveriko fa handao an'io fanambarana io.
FANONTANIANA: Handefa an'ity tsy taratasy ity ve ry zalahy, toy ny amin'ity herinandro ity? Afaka miresaka kely momba ny teknika amin'izany ve ianao, inona no mety hitranga?
MR PRICE: Araka izany, araka ny nambaran’ny Sekretera tamin’ny zoma, dia manantena izahay fa ho afaka handefa valiny an-tsoratra amin’ity herinandro ity. Alohan'ny hanaovanay izany, sy ny ataonay amin'izao fotoana izao - ary ity dia tonga amin'ny fanontanianao teo aloha momba ny fifampiraharahana amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miombon'antoka Eoropeana - ny zavatra nataonay, araka ny fantatrao sy ny hitanao, dia fandrindrana tsy tapaka ary fifampidinihana tamin'ireo mpiara-dia sy mpiara-miombon'antoka aminay any ampitan'ny Atlantika.
Nanao izany izahay tamin'ny valinteny tsy mbola nisy toy izany, haingana, mahery, henjana, niraisan'i Rosia raha sendra misy herisetra bebe kokoa, saingy nanao izany koa izahay tao anatin'ny tontolon'ny valiny an-tsoratra izay homenay. ho an'ny Federasiona Rosiana, tahaka ny nanaovanay izany ho setrin'ny zavatra nolazainay momba ireo faritra izay mety hisy ny fandrosoana amin'ny dingana mifanandrify izay mety hanatsara ny filaminan'ny fiarahantsika. Ary amin'ny fiarovana iombonana, ny filaminan'ny vondrom-piarahamonina transatlantika no tiako holazaina fa mety hamaha ny olana sasany naroson'i Rosia ihany koa.
Koa rehefa mandinika ny dingana manaraka amin'ny fiarahanay izahay – ary izany, raha ny marina, ny fanomezana valinteny an-tsoratra ho an'ny Federasiona Rosiana – dia mizara ireo hevitra ireo aminay izahay – ary nizara ireo hevitra ireo tamin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon'antoka eoropeanay izahay. Raisinay ny valin-tenin'izy ireo. Ampidirinay ao anatin'ny valin-kafatra an-tsoratra izany valiny izany. Ary rehefa vonona ny hampita izany isika dia hanao izany. Manantena aho fa ho amin'ity herinandro ity.
FANONTANIANA: Ned, noho izany dia nilaza ianao fa tsy misy antoandro ny valiny, ary ho hitantsika izany. Saingy misy mazava – ary ampahibemaso any ivelany – ny andro mazava momba ny fandrahonana. Ny Eoropeana, Frantsay, ary ny hafa, Mr. Borrell, dia toa sorena amin'ny feo mampatahotra ao Washington momba ny fandrahonana mananontanona, ary izy ireo - efa nilaza izy ireo fa tsy voatery ho voan'ny aretim-po isika, manana mba ho tony, ary tsy hitantsika izany fandrahonana mananontanona izany araka ny lazain'i Etazonia. Mbola miteny ve ianao fa misy – misy atahorana hanafika? Nahoana no misy izany fahasamihafana eo aminao sy ny Eoropeana izany?
MR PRICE: Francesco, tsy hitanay ny fahasamihafana lazainao.
FANONTANIANA: Milaza izany izy ireo. Milaza ampahibemaso izy ireo fa ny -
MR PRICE: Ny zavatra hitanay sy hitanareo ihany koa dia ny fanambarana. Ary ny fanambarana - ny fanambarana izay, ohatra, dia avy amin'ny Vaomiera Eoropeana izay nilaza tamin'ny fiteny mitovitovy amin'izany raha tsy izany - raha tsy mitovy amin'ny fanambarana avy amin'ny G7 ao amin'ny OTAN momba ny voka-dratsin'ny Federasiona Rosiana amin'ny hetsika. ny fanafihana an'i Okraina toy izany. Efa – tsy i Etazonia irery no nanao an’ity raharaha ity. Niaraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miombon'antoka Eoropeana izahay, miaraka amin'ireo andrim-panjakana sy fikambanana maro samihafa toa ny OTAN sy ny OSCE ary ny G7. Ary indray, raha mijery ilay fiteny ianao – ary tsy ho gaga ianao raha mandre fa tsy nahy izany – dia hahita fiteny mitovitovy amin'izany ianao manerana ireo mpiara-dia aminay sy mpiara-miombon'antoka ary manerana ireo andrim-panjakana maro samihafa ireo.
Raha ny amin'izay nokasain'ny Rosiana no resahina, dia mazava ho azy fa ny olona rehetra dia afaka mahita ny fananganana goavana ny tafika Rosiana manamorona ny sisintanin'i Okraina. Nazava tsara ny ahiahinay momba ny karazana herisetra sy fihantsiana hafa mety ho tian'ny Rosiana horaisina sy efa noraisiny. Saingy tsy misy afa-tsy olona iray ihany no mahafantatra izay nomanin'ny Federasiona Rosiana ho an'i Okraina, dia i Vladimir Putin izany.
Ny tanjonay dia ny hanakana sy hiaro amin'ny drafitra toy izany, toy ny fahavononanay hanohy ny lalan'ny diplaomasia sy ny fifanakalozan-kevitra. Hitanareo izahay nanohy ny lalan'ny diplaomasia sy ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny fomba marina sy tsy miovaova tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ny dian'ny Sekretera tany Genève tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo dia dingana farany tamin'izany dingana izany izay nandraisan'ny sekretera lefitra tamin'ny fihaonany tamin'ny Federasiona Rosiana tamin'ny Dialogue Stability Strategic, ny fivoriana tao amin'ny Filankevitry ny OTAN-Russia, ny fandraisana anjara amin'ny teny manodidina. Ny OSCE, sy ireo mpiara-dia hafa koa dia nandray anjara tamin'ny Federasiona Rosiana ho amin'izany tanjona izany.
Noho izany, mba hazava tsara, dia vonona ny hanohy izany lalana izany isika. Ity lalana ity dia tsy hahomby raha tsy ao anatin'ny tontolon'ny fanalefahana. Saingy satria vonona sy mirotsaka amin'ny dingana sy ny lalan'ny diplaomasia sy ny fifanakalozan-kevitra isika dia tsy midika fa tsy miomana amin'ny fiarovana sy ny fanakantsakanana. Samy manao izany izahay amin'ny fotoana mitovy satria vonona izahay amin'ny safidy izay ataon'i Vladimir Putin.
FANONTANIANA: Ary heverinao ve fa misy fandrahonana manafika mananontanona, fa mety ho akaiky, eo no ho eo ny fanafihana, araka ny lazain'ny Eoropeana fa lazainao amin'izy ireo, araka ny faharanitan-tsainao?
MR PRICE: Eny ary, mazava tsara ny momba izany tamin'ny toerana maromaro, anisan'izany ny toro-hevitra momba ny consul navoakanay omaly hariva. Ny fandrahonana izay hitantsika fa mazava tsy ho antsika ihany fa mazava ho an'ny mpanara-maso tsy miangatra raha jerena ny zava-mitranga manamorona ny sisintanin'i Okraina, izay mitranga ao anatin'ny faritra tokony ho faritany Belarosiana manjaka, dia miteraka ahiahy lehibe izany. Ary noho izany dia manao dingana amim-pahamalinana izahay. Izahay, mazava ho azy, dia mizara vaovao sy faharanitan-tsaina amin'ireo mpiara-dia aminay izay miresaka momba ny ahiahinay ary miresaka ihany koa ny zava-misy fa ny Rosiana dia toa efa vonona ny hanao hetsika mahery vaika manohitra an'i Okraina amin'ny fotoana rehetra.
FANONTANIANA: Fa ny fanarahana ny hevitr'i Francesco -
FANONTANIANA: Ary ny farany ihany. Tokony hanantena fihaonana vaovao na fihaonana na fihaonana virtoaly eo amin'ny Sekretera sy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Lavrov ve isika aorian'ny valinteny vao haingana?
MR PRICE: Eny, henonao tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny tamin'ny herinandro lasa. Henonao ihany koa ny Sekretera tamin’ny herinandro lasa fa hanome valiny an-tsoratra izahay. Misokatra amin'ny fifampikasohana fanampiny isika, ny fifampikasohan'ny olona, ​​raha toa ka izany - raha toa ka ilaina izany raha heverinay fa mety hahasoa izany, raha heverinay fa tokony ho singa manaraka eo am-panaovana ny lalan'ny fifanakalozan-kevitra sy ny diplaomasia. Koa misokatra amin’izany izahay.
FANONTANIANA: Taorian'ny fanontanian'i Francesco, minitra vitsy lasa izay dia nilaza ny mpitondra tenin'ny Pentagon, ary mitanisa eto aho, fa raha tokony hampavitrika ny NRF ny OTAN, dia samy nilaza ny isan'ny hery izay napetraky ny Sekretera Atoa Austin tamin'ny fanairana ambony. mpiasa 8,500 eo ho eo. Ao anatin'izany - ao anatin'izany sehatra izany, ny masoivoho amerikana teo aloha tany Okraina John Herbst dia nilaza tamin'ny NPR androany maraina fa nihevitra izy fa ny resaka rehetra momba ny fametrahana ny tafik'i Etazonia ho fanakantsakanana fanampiny dia tokony ho natao talohan'izao. Fa maninona no tonga tamin'ity faran'ny herinandro ity ny fanapahan-kevitry ny governemanta Biden hametraka ny tafika amerikana amin'ny toerana apetraka ho ampahany amin'ny OTAN mba handefa hafatra amin'i Vladimir Putin?
MR PRICE: Eny, avelao aho hanome hevitra roa. Voalohany, hanemotra ny mpiara-miasa amiko sy ny teo alohako aho hiresaka amin'ireo drafitra izay ataon'ny Pentagon, saingy ny Filoha dia nazava tsara momba ny voka-dratsin'ny Federasiona Rosiana raha toa ka mandroso miaraka amin'ny herisetra fanampiny i Rosia. manohitra an'i Okraina. Niresaka momba ny voka-dratsiny ara-toekarena sy ara-bola izay hiaretan'i Rosia izay tsy mbola nisy toy izany amin'ny lafiny maro, fepetra izay nofidianay tsy horaisina taorian'ny taona 2014. Niresaka momba ny ambaratonga fanampiny amin'ny fanampiana fiarovana fiarovana izahay. dia vonona ny hanome ho an'ireo mpiara-miombon'antoka Okrainiana, mihoatra sy mihoatra ny $650 tapitrisa izay nomenay an'i Kyiv tao anatin'ny herintaona fotsiny. Izany dia fanampiana fiarovana bebe kokoa noho izay nomena tao anatin'ny herintaona ho an'ireo mpiara-miombon'antoka aminay any Ukraine.
Nazava ihany koa anefa ny filoha fa raha handroso ny Rosiana, dia hanamafy ny antsoina hoe faritra atsinanan'ny OTAN izahay. Saingy na dia efa nilaza izany aza izahay dia tsy nanaisotra velively ny safidy hanome fanampiana fanampiny mialoha ny mety ho fanafihana. Ary noho izany dia misy voka-dratsiny maromaro nofaritanay fa hiaretan'ny Federasiona Rosiana. Misy dingana maromaro izay ataonay amin'izao fotoana izao momba ny fanampiana fiarovana fiarovana an'i Okraina, amin'ny resaka fampitandremana izay arosonay momba ny voka-dratsin'ny Federasiona Rosiana, ary izao renareo izao. avy amin'ny mpiara-miasa amiko ao amin'ny Pentagon.
FANONTANIANA: Taorian'izany, moa ve ireo dinika ireo momba ny fampiasana ny tafika amerikana - moa ve izany dia ampahany amin'ny valinteny mitohy ao anatin'ny fitantanan'i Biden talohan'ny nahafantarana ampahibemaso ireo tatitra ireo tamin'ity faran'ny herinandro ity? Ampahany mavitrika amin'ny adihevitra momba ny fomba hiatrehana ny herisetra Rosiana ve izany?
MR PRICE: Lazaiko amin'ny ankapobeny, raha tsy miresaka amin'ny fifampidinihana anatiny, fa tsy ho hita ampahibemaso ny zavatra tahaka izao raha vao nampidirina. Efa nandinika dingana maromaro izahay, ary henonao ny Pentagon miresaka ampahibemaso momba izany androany. Ny firesahana ampahibemaso momba an'io androany io dia manondro fa tsy akora vaovao izany raha toa ka dinihina ny valin'ny zavatra hitantsika ankehitriny.
FANONTANIANA: Namboarina ve izany mba hahatonga ny Rosiana hieritreritra indray ny fametrahana miaramila fanampiny ao Belarosia sy hanandrana hanamafy ny fisiany any amin'ny faritra atsimon'i Okraina?
MR PRICE: Ny tanjonay amin'izany rehetra izany dia ny hiaro sy hanakana. Noho izany dia manao dingana maromaro izahay amin'ny fiarovana an'i Okraina, ao anatin'izany ny fanomezana fanampiana fiarovana amin'ny fiarovana, fa manao dingana maromaro mba hanakanana izay mety ho ao an-tsain'ny Federasiona Rosiana sy izay mety ho ao an-tsain'i Vladimir Putin manokana. Ka amin'ny fanontanianao, eny.
FANONTANIANA: Ary avy eo indray: Ny masoivoho amerikanina ao amin'ny Firenena Mikambana dia nanao famelabelarana androany, ary nipoitra ny fanontaniana hoe karazana resadresaka nifanaovany tamin'ireo mpikambana hafa tao amin'ny Filankevitry ny Fiarovana momba ity toe-javatra ity, ary navelan'ny Masoivoho Thomas-Greenfield izy. niresaka tamin'ny mpiara-dia aminy Rosiana. Inona no niampangana azy tamin'ny ambasadaoro Nebenzya momba ny fandrahonana hitan'i Etazonia amin'ny fiandrianam-pirenen'i Okraina? Ary nahoana i Etazonia no tsy nanosika ny fivorian'ny Filankevim-piarovana momba ity raharaha ity alohan'ny handraisan'i Rosia ny filoha ny talata ho avy izao?
MR PRICE: Eny, heveriko fa henonao ihany koa ny Masoivoho fa tena nifandray tamin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny Filankevi-piarovana sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny Firenena Mikambana izy. Niaiky tokoa izy fa nifandray tamin'ny Rosiana mpiara-miasa aminy izy, saingy afaka manome toky anao aho – ary heveriko fa araka ny nandrenesanao azy ihany koa – fa tsy ilay Rosiana mpiara-miasa aminy irery no iresahany. Ary manantena aho fa handre avy aminy ianao fa ny fifandraisany amin'ireo mpiara-dia amintsika, ao anatin'izany ireo ao amin'ny Filankevitry ny Fiarovana, sy ireo mpiara-miombon'antoka amintsika dia nivelatra lavitra noho ny fifandraisany tamin'ny mpiara-dia aminy Rosiana ao amin'ny Filankevitry ny Fiarovana.
Raha ny hafatra anefa dia mazava ny hafatra ren’ny Rosiana taminay ary nitohy ihany koa. Nazava sy nirindra teo imason’ny besinimaro izany; efa mazava sy mifanaraka amin'ny manokana. Voalohany indrindra, aleontsika ny lalan’ny diplaomasia sy ny fifampiresahana. Mino izahay fa io no hany fomba tompon'andraikitra amin'ny fanalefahana ny fihoaram-pefy sy ny fampitsaharana ny herisetra mitohy ataon'i Rosia amin'i Okraina sy ny inona – izay mety ho drafitra hafa mety hatrehin'ny Federasiona Rosiana. Efa naheno ihany koa izy ireo – ary nandre izany tamin'ny fiarahanay manokana, fa koa ampahibemaso indrindra – fa tahaka ny fiomanana amin'ny fifanakalozan-kevitra sy ny diplaomasia, dia mikatsaka ny fiarovana sy ny fisorohana izahay, ary niresaka tamin'izany izahay. efa betsaka ankehitriny. Saingy fantatry ny Rosiana, satria henony mivantana taminay izany, fa vonona ny handray anjara izahay. Fantatr'izy ireo fa misy olana sasantsasany izay heverintsika fa mety hiverina amin'ny laoniny ny fifampiraharahana sy ny diplaomasia eo amin'ny filaminantsika iombonana, ny fiarovana iraisan'ny vondrom-piarahamonina transatlantika, ary mety hanampy amin'ny famaliana ny sasany amin'ireo ahiahin'ny Federasiona Rosiana izany.
Saingy efa nandre avy aminay ihany koa izy ireo, ary zava-dehibe toy izany koa, fa misy faritra hafa, anisan'izany ny politikan'ny OTAN "Open Door", izay tsy misy toerana ara-barotra. Tsy misy mihitsy. Ary noho izany tamin'ny fiarahanay rehetra, na ny Sekretera, ny Sekretera lefitra, ny masoivoho Thomas-Greenfield, dia mazava sy tsy miova ireo hafatra ireo.
FANONTANIANA: Ned, te hanova lohahevitra aho.
MR PRICE: Na inona na inona - okay, hitako fa mety misy fanontaniana roa hafa. Ben.
FANONTANIANA: Eny, ny fandroahana ampahany amin'ny masoivoho dia mampiseho mazava fa miahiahy momba ny fiarovana ny Amerikana ao Okraina ianao. Ary efa nazavainao mazava tsara koa ny mety hitranga raha hanafika i Rosia. Hanararaotra izao fotoana izao ve ianao hampitandrina an'i Rosia amin'ny fanimbana ny Amerikanina ary hilaza izay mety ho vokany raha manao izany izy ireo?
MR PRICE: Koa avelao aho handray an'io fanontaniana io ary hanazava fa tsy manana laharam-pahamehana ambony kokoa noho ny fiarovana sy ny fiarovana ny Amerikana manerana izao tontolo izao isika. Ary omaly hariva dia naheno anay niresaka tamin'ny dingana feno fahendrena izay ataonay eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonim-pirenena diplomatika ao Kyiv ianareo, noho ny fahafantarana fa manana izao fananganana miaramila goavana izao ny Rosiana, ka mety ho vonona hanao hetsika mahery vaika izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Ary noho izany ny fialàn'ny mpiasa tsy vonjy maika ao amin'ny masoivohontsika sy ny fiaingan'ireo miankina amin'ny didy dia ampahany sy taratry ny laharam-pahamehana lehibe apetratsika amin'ny fiarovana sy ny fiarovana ny vahoaka amerikana.
Tsy te-hiditra amin'ny fifanakalozan-kevitra manokana aho, fa nasehonay mazava tsara tamin'ny Rosiana ny laharam-pahamehanay amin'ny fiarovana sy ny fiarovana ny vahoaka amerikana. Fantatr'izy ireo fa izany no laharam-pahamehanay ambony indrindra. Fantatr'izy ireo fa manao ezaka be izahay mba hiarovana ny fiarovana sy ny fiarovana azy ireo. Ary avelao aho amin'izay.
FANONTANIANA: Raha jerena ny isan'ny olona, ​​ny Amerikana ao Okraina, omaly dia fantatro fa tsy ho voasarika amin'ny isa marina ny Departemantam-panjakana. Saingy satria tsy fantatrao hoe firy sa tsy hilaza fotsiny hoe firy ny Amerikanina ao Okraina?
MR PRICE: Ny tanjonay hatrany dia ny hanome anao vaovao ara-potoana sy marina, ary amin'izao fotoana izao dia tsy manana isa iray izay heverintsika ho marina amin'ny isan'ny Amerikanina, Amerikana tsy miankina, mipetraka ao Okraina, ary holazaiko. nahoana ianao. Efa naheno izany ianao tamin'ny tontolon'ny Afghanistan, fa rehefa mandeha any ampitan-dranomasina ny Amerikana dia mazava ho azy fa tsy voatery misoratra anarana any amin'ny masoivoho any amin'ny firenena. Mamporisika ny Amerikana foana izahay mba hisoratra anarana rehefa mandeha any ivelany miaraka amin'ny rafitra antsoina hoe STEP, saingy heveriko fa maro aminareo no afaka manaporofo fa rehefa mandeha any ampitan-dranomasina ianao dia mety tsy hanao izany foana. Ary ny sasany aminareo angamba mbola tsy nanao izany mihitsy.
Toy izany koa, rehefa nandao ny firenena ny Amerikanina, dia mila manala ny tenany izy ireo. Ary noho izany satria maro no tsy misoratra anarana amin'ny voalohany, heveriko fa azo antoka fa maro - ireo izay tena misoratra anarana dia mety tsy hanala ny tenany amin'ny isan'ny olom-pirenena amerikana izay mipetraka any amin'ny firenena vahiny.
Ny teboka iray hafa dia ny hoe na dia misoratra anarana aza ny olona, ​​ny Departemantam-panjakana dia tsy afaka manamarina tsy miankina fa ny olona iray izay nisoratra anarana tao amin'ny STEP, ilay antsoina hoe rafitra STEP, dia tena olom-pirenena amerikana. Noho izany dia misy isa maromaro - noho ny antony maromaro, ny tally - tsy manana tally marina isika amin'izao fotoana izao.
Rehefa nandefa hafatra tamin'ny vahoaka amerikana tao amin'ny – vondrom-piarahamonina tsy miankina Amerikana ao Kyiv, any Okraina izahay tato anatin'ny andro vitsivitsy, dia namporisika azy ireo hameno taratasy izay hanampy anay hahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny haben'ny vondrom-piarahamonin'ny olom-pirenena amerikana tsy miankina. any Ukraine. Tsy izany anefa no zavatra ananantsika amin'izao fotoana izao.
FANONTANIANA: Ary iray hafa. Nanonona an'i Afghanistan ianao. Manontany tena aho raha misy - misy zavatra avy any Afghanistan nianaranao momba ny famantarana sy ny fanavotana ny Amerikana ao anatin'ny faritra misy ady izay heverinao fa azo ampiharina eto?
MR PRICE: Eny, mazava ho azy fa tsy toe-javatra mifanandrify ireo, ka tsy tiako ny manoro hevitra hafa. Ny andraikitray voalohany dia ny fampahafantarana ny fiarahamonin'ny olom-pirenena amerikana momba ny fivoaran'ny fiarovana sy ny fiarovana. Izany no nataonay vao haingana omaly hariva rehefa namoaka ny Fanavaozana Travel Advisory sy miaraka amin'ny Media Note mba hampahafantarana azy ireo ny fivoaran'ny fiarovana sy ny fiarovana. Ary mety ahitana fampahalalana momba ny safidy fitsangatsanganana ara-barotra izany.
Nanao izany izahay satria, araka ny nambaran'ny filoha, dia mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra ny hetsika ara-miaramila ataon'i Rosia. Ary isika rehetra dia mahafantatra ary isika rehetra dia nahita famantarana fa izany no zava-misy, raha jerena ny fananganana miaramila lehibe. Nazava ihany koa izahay fa tsy ho afaka handroaka olom-pirenena amerikana, olom-pirenena amerikana tsy miankina, ao anatin'ny trangan-javatra toy izany. Ary izany no antony nandrisika ireo olom-pirenena amerikana tsy miankina izay mety ho any Okraina mba hanao drafitra mifanaraka amin'izany, ao anatin'izany ny fampiasana safidy ara-barotra raha toa ka misafidy ny handao ny firenena izy ireo. Na dia mampihena ny haben'ny dian'ny masoivohonay aza izahay, dia eo ny masoivoho hanampy ny olom-pirenena amerikana amin'izany. Ao anatin'ny iray isika - manana fahafahana manome, ohatra, fampindramam-bola ho an'ny Amerikana izay mikatsaka ny hampiasa ireo safidy ara-barotra ireo hiverina any Etazonia.
FANONTANIANA: Ned —
FANONTANIANA: Afaka manaraka ny-
FANONTANIANA: Raha tsy mampaninona anao.
FANONTANIANA: Voalohany, inona no tianao hotratrarina amin'ny fihaonana miaraka amin'i Biden miaraka amin'ireo mpitarika eoropeana? Azo inoana fa miorina amin'ny fivorian'i Mr. Blinken io maraina io. Inona àry no tianao hotratrarina amin’izany?
Faharoa, tamin'ny fivoriana tamin'ny marainan'i Mr. Blinken niaraka tamin'ny Filankevitra Eoropeana, nahazo fanontaniana momba ny fanapahan-kevitr'i Etazonia amin'ny fampihenana ny masoivoho ve izy? Satria ny Eoropeana sasany dia tsy mitovy pejy, ary araka ny nambaran'i Francesco, dia manoro hevitra izahay fa ilaina ny fampidinana kely ny kabary, fa tsy misy fahasamihafana eo amin'ny fiarovana mba hanoroana fanafihana mananontanona. Inona àry no antenainao ho tratrarina, ary inona no ren'Andriamatoa Blinken momba ny fomba fiasa amerikana?
MR PRICE: Araka ny voalazanao, Barbara, dia nandray anjara tamin'ny Vaomieran'ny Raharaham-bahiny EU ny sekretera androany. Nanasa azy ny solontena ambony ao amin'ny EU Josep Borrell. Mba hanomezana tsiro anao amin'izany, ny Sekretera dia nanome fanazavana tamin'ireo mpiara-miasa taminy tamin'ny fitsidihany tany Kyiv, Berlin, ary Genève tamin'ny herinandro lasa teo. Ao anatin'ny ezaka, dia niresaka tamin'ny – mba hampihenana ny fihenjanana nateraky ny fananganana miaramila tsy am-piheverana nataon'i Rosia sy ny fitohizan'ny herisetra nataony tamin'i Okraina.
Tamin'ny fiaraha-mientana androany maraina dia nanantitrantitra ny Sekretera fa hanohy ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny Vondrona Eoropeana sy ireo firenena mpikambana ao aminy isika ankoatra ireo andrim-panjakana maro samihafa izay efa noresahintsika. Izany no NATO, izany no OSCE, ary miaraka amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon'antoka tsirairay. Ary nandritra ity fihaonana ity dia nasehon'ny sekretera fa tamin'ny alalan'ny fampahafantarana azy ireo momba ny fifampiraharahana tamin'ny herinandro lasa teo, mazava ho azy, anisan'izany ny fifampiraharahana tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Lavrov.
Hitanareo fa taoriana kelin'ny nifaranan'ny fihaonana tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Lavrov tamin'ny zoma, dia nanana fahafahana niresaka tamin'ny mpiara-miasa aminy Okrainiana ihany koa ny Sekretera mba hamerimberenana azy momba ireo fifanakalozan-kevitra ireo, ary izany no fomba fanaonay nandritra ny hetsika rehetra. ny fiarahanay – miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka Eoropeana, mpiara-miombon'antoka Eoropeana, mazava ho azy, anisan'izany ireo mpiara-miombon'antoka Okrainiana, satria tsy misy na inona na inona momba azy ireo izahay raha tsy misy azy ireo. Tsy misy na inona na inona momba an'i Okraina raha tsy misy an'i Okraina. Tsy misy na inona na inona momba an'i Eoropa raha tsy misy an'i Eoropa. Tsy misy na inona na inona momba ny OTAN raha tsy misy ny OTAN.
Noho izany ny fandraisan’ny Sekretera anjara tamin’ny fivoriana androany dia fotoana iray hafa tamin’ny toerana iray hafa hanatanterahantsika izany. Mazava ho azy fa nandray anjara lalina tamin’izany koa ny Filoha. Hitanao fa namory ny ekipany izy, na mivantana na an-tserasera, tao amin'ny Camp David tamin'ny faran'ny herinandro mba hiresaka momba izany. Noho izany dia tsy tokony hahagaga raha manana fahafahana hiresaka amin'ny mpiara-miasa aminy momba ireo olana ireo ny Filoha amin'izany - miaraka amin'io teny io ihany ao an-tsaina.
Raha mikasika ny fanapahan-kevitra noraisinay omaly hariva dia te hamerina ny hevi-dehibe ihany aho, ary izany dia mikasika ny fepetra iray sy ny fepetra iray ihany, ary izany dia ny fiarovana sy ny fiarovana ny ekipantsika eny an-kianja any Okraina. . Ary dingana feno fahamalinana izany rehefa tonga tamin'ny fiaingan'ny olona miankina. Dingana feno fahamalinana izany rehefa tonga tamin'ny fialana ara-dalàna ireo mpiasa tsy manan-danja.
Saingy mamelà ahy hazava ihany koa fa io fanapahan-kevitra io dia tsy milaza na inona na inona momba ny fanoloran-tenantsika amin'ny fiandrianam-pirenen'i Okraina sy ny tsy fivadihan'ny faritany. Tsy voahozongozona ny fanoloran-tenanay amin'ny fiandrianam-pirenen'i Okraina sy ny tsy fivadihan'ny faritany. Ny masoivoho dia manohy miasa ary ny fiampangana, mazava ho azy, dia mijanona ao Okraina. Ny zava-misy fa mandray fepetra amim-pahamalinana izahay ho an'ny fiarovana ny olom-pirenena amerikana dia tsy manimba ny fanohananay na ny fanoloran-tenanay amin'i Okraina. Hitanao fa misy endrika isan-karazany ny fanohanana.
Mazava ho azy fa vao tany Kyiv ny Sekretera tamin'ny herinandro lasa, izay nahenoanao azy namerina ireo hafatra ireo teo akaikin'ny filoha Zelenskyy, teo akaikin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Kuleba. Nanohy nanome fanampiana fiarovana fiarovana izahay. Tonga tao Kyiv ny zoma alina ka hatramin'ny asabotsy ny fanaterana voalohany ny ampahany fanampiny mitentina 200 tapitrisa dolara tamin'ny volana Desambra. Hanohy hanome fanampiana fiarovana fiarovana ho an'ireo mpiara-miombon'antoka aminay izahay, ary hanohy hanambara amin'ny fomba tsy azo antoka ny fanoloran-tena maharitra anananay amin'ny tsy fivadihan'ny faritany sy ny fiandrianam-pirenen'i Ukraine mpiara-miasa aminay.
FANONTANIANA: Afaka manaraka izany ve aho?
MR PRICE: Mba miangavy re!
FANONTANIANA: Satria nilaza indray ianao fa dingana feno fahendrena izany, saingy ny Governemanta Okrainiana dia nanohitra mazava io hetsika io ary ny minisitry ny raharaham-bahiny androany dia niantso azy io ho malina loatra. Misy heviny ve ao amin'ny fitantanan-draharaha fa mety hiteraka korontana ao Okraina izany amin'ny fotoana izay indrindra no ezahan'i Rosia atao amin'ny fanakorontanana ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny firenena?
MR PRICE: Izany dia momba ny zavatra iray ary zavatra iray ihany, ary izany -
FANONTANIANA: Efa noeritreretinao ve ny tahotra mety ho naterany?
MR PRICE: Miala tsiny aho. Inona no nataonay?
FANONTANIANA: Noheverinao ve ny tahotra mety ho naterany?
MR PRICE: Ny noheverinay dia ny fiarovana sy ny fiarovana ny vahoaka amerikana. Ary fanapahan-kevitra izay ny governemantan'i Etazonia ihany no afaka mandray izany satria laharam-pahamehana ny fiarovana sy ny fiarovana, amin'ity tranga ity, ny mpiara-miasa aminay sy ny fianakaviany ihany koa. Tsy milaza na inona na inona amin'ny fanohananay tsy mihozongozona sy tsy miato ho an'ireo mpiara-miombon'antoka Okrainianay izany. Momba ny zavatra iray ary zavatra iray ihany izany: ny fiheverana momba ny fiarovana sy ny fiarovana ny mpiara-miasa aminay.
FANONTANIANA: Saingy izany miaraka amin'ny fanambaran'ny Pentagon androany momba ny fametrahana miaramila 8,500 ho an'ny fiandrasana, ankoatra ny fipetrahan'ny besinimaro tamin'ny zoma tamin'ny fahatongavan'ilay fanampiana mahafaty vaovao, toa toa mampitombo ny fanerena anao eto Rosia amin'ny lafiny iray. Lavinao ve izany? Heverinao ve fa niova tanteraka ny fihetsikao?
MR PRICE: Izany dia momba ny fiarovana sy ny fisorohana. Ny mampanahy anay dia ny mety hisian'ny herisetra Rosiana. Tsy resaka fiarovana izany. Tsy resaka fanakantsakanana izany. Izany dia momba ny hetsika manafintohina amin'ny firenena manana fiandrianam-pirenena, firenena manana ny fiandrianany izay mpiara-miombon'antoka akaiky amin'i Etazonia. Ka ny fampitoviana ireo zavatra roa ireo dia tena tsy marina, ary izany koa no tena henontsika avy any Moskoa. Ireo dia singa samihafa amin'ny kalitao sy dingana samihafa izay ataontsika. Raha nihemotra ny Rosiana, dia tsy ho hitanao mazava tsara ny hetsika mitovy amin'ireo mpiara-miombon'antoka Okrainiana, avy amin'ny OTAN, avy any Etazonia.
Ity ny teboka midadasika kokoa, ary efa nandre ny Sekretera nilaza izany imbetsaka ianao. Raha ny marina, tamin'ny fihaonany tamin'ny minisitry ny Raharaham-bahiny Lavrov tamin'ny zoma dia nanao izany mivantana izy, nilaza izany mivantana tamin'ny minisitry ny Raharaham-bahiny. Ary nilaza izy fa tena tsy azon'i Etazonia ny fipetrahan'i Rosia stratejika eto satria nandritra ny taona maro sy tao anatin'izany fisondrotana izany, Vladimir Putin sy ny Federasiona Rosiana dia nampihena ny zavatra rehetra notadiaviny hisorohana. Ary efa nandre ny Sekretera niresaka momba ny fitomboan'ny fanohanana ny mpikambana ao amin'ny OTAN eo amin'ny Okrainiana nanomboka tamin'ny 2014, ny haavon'ny fanohanana izay nitombo avo roa heny. Henonareo izahay sy ny OTAN amin'ny maha-firaisankina anao niresaka momba ny fandraisana andraikitra fanomezan-toky izay nipoitra avy hatrany tamin'ny herisetra tsy nampoizina nataon'i Rosia tamin'i Okraina tamin'ny taona 2014.
Noho izany dia mety hitaraina ny Rosiana ary mety handinika tsara sy hanondro ireo ezaka ho fiarovana sy fisorohana ireo, saingy ny herisetran'izy ireo no nampihena ny zavatra henontsika sy hitan'izy ireo.
Ary ity koa ny ahiahy hafa, ary tsy nieritreritra ny momba izany izahay: ny ahiahinay fa ny Rosiana, tahaka ny nataony tamin'ny taona 2014, dia mety mitady hanao fiatoana ho an'ny herisetra fanampiny amin'i Okraina. Raha te-hanao an'izany ianao, dia amin'ny fomba sasany ny mety ho endrik'izany. Izany no nampanahy anay hatry ny ela. Izany no antony niresahanay tsy tamin'izany ahiahy izany ihany fa ny antony nametrahanay ny vaovao eo am-pelatananay manokana izay miresaka momba ny dingana mety horaisin'ny Federasiona Rosiana amin'izany tanjona izany.
FANONTANIANA: Afaka mahazo iray fanampiny ve aho azafady?
MR PRICE: Avelao aho hamita an'i Conor.
FANONTANIANA: Tsia, tsy maninona izany. Fanontaniana farany iray manokana momba ny firaisan'ny OTAN. Nilaza indray ny minisitry ny raharaham-bahiny Okrainiana fa manimba ny firaisankina ao amin'ny Alliance i Alemaina, amin'ny ampahany noho izy ireo manakana an'i Estonia amin'ny famindrana fitaovam-piadiana, tsy hanome fitaovam-piadiana ny tenany, ny fanehoan-kevitry ny lehiben'ny tafika an-dranomasina tamin'ny faran'ny herinandro - na tamin'ny herinandro lasa. Manana valiny amin'izany ve ianao, ity hevitra ity fa tsy ampy ny ataon'i Alemaina ao anatin'ny Alliance hanohanana ny firaisankina?
MR PRICE: Ny Sekretera dia nanana fahafahana nihaona tsy tamin'ny Chancellor Scholz ihany fa tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Baerbock tamin'ny herinandro lasa tany Berlin, ary ny minisitry ny raharaham-bahiny dia nanontaniana io fanontaniana io teo akaikin'ny Sekretera. Ary niresaka momba ny zavatra ataon'i Alemaina izy, ny fandraisana anjara lehibe ataon'i Alemaina ho an'i Okraina. Avelako any Alemaina ny hiresaka momba ireo fandraisana anjara manan-danja ireo. Fa ny hazavaina dia tsy misy mazava ny andro eo amin'ireo mpiara-dia aminay sy ireo mpiara-miombon'antoka aminay momba ny voka-dratsy mety hitranga amin'ny Federasiona Rosiana raha hirosoana izany.
FANONTANIANA: Inona no mety ho endriky ny de-escalation?
FANONTANIANA: Zavatra iray monja ao Okraina, zavatra iray farany momba an'i Okraina.
FANONTANIANA: Mety ho de-escalation - inona no mety ho endriky ny de-escalation? Ny tiako holazaina dia manana ny – ankehitriny, voalaza fa manana miaramila 100,000 ao amin'ny faritaniny manokana manamorona ny sisintany izy ireo. Ka mety ho toy ny hoe mety hanala miaramila 25,000 izy ireo? Ny tiako holazaina dia manao ahoana ny escalation?
MR PRICE: Mety ahitana izany. Tsy hanao prescriptive aho.
FANONTANIANA: Misy tarehimarika tianao ho hita ve?
MR PRICE: Indro, tsy hanao prescriptive momba izany aho. Heveriko fa mety hiseho amin'ny endriny maro ny de-escalation. Mety haka ny endriky ny zavatra hitanay sy hitanay teny amin'ny sisintanin'i Okraina izany. Mety haka ny endriky ny zavatra hitantsika amin'ny lafin'ny hetsika Rosiana any amin'izay tokony ho firenena manana fiandrianam-pirenena hafa, Belarosia. Mety haka ny endriky ny zavatra henontsika avy amin'ny Federasiona Rosiana izany. Mety misy endrika maro ny de-escalation.
Mety hiseho amin'ny endriny maro izany ho dingana voalohany, ary izany no tiantsika ho hita miaraka amin'ny tanjona farany amin'ny fahitana ny fiverenan'ny tafika Rosiana any amin'ny toby maharitra misy azy ireo, mba hampitsahatra izany ary hampitsahatra sy hamadika ity fananganana manaraka ny sisintanin'i Okraina ity, mitsahatra amin'ny kabary masiaka. Mety misy endrika maro ny de-escalation. Horaisinay tsara na inona na inona.
FANONTANIANA: Noho izany - raha toa ka miverina ao amin'ny toby misy azy amin'ny fotoana rehetra ihany ny tafika Rosiana - dia heverina ho fanalefahana izany?
MR PRICE: Tsia. Ny tiako holazaina dia misy endrika maro azo atao ny de-escalation. Misy ihany koa ny continuum. Raisinay, fara faharatsiny, ho dingana voalohany, ny endrika fanalefahana.
MR PRICE: Eny.
FANONTANIANA: Eny, fantatrao ve ny fihaonana izay hatao any Paris amin'ny alarobia eo amin'ny manampahefana Okrainiana sy Rosiana, ary manantena ve ianao fa hisy fandrosoana?
MR PRICE: Eny, noho izany dia tsy manantena ny fandraisana anjara Amerikana amin'izany aho. Andao hojerena. Araka ny efa fantatrao, dia miara-midinika amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miombon'antoka, anisan'izany i Okraina, mba hamaritana ny dingana manaraka, ary mifandray amin'ny Federasiona Rosiana ihany koa izahay, araka ny voalazanay. Mino izahay fa ny diplaomasia no lalana tsara indrindra handrosoana, ary vonona izahay hanohana ny fifanakalozan-kevitra sy ny diplaomasia izay manampy amin'ny fampihenana ny disadisa. Noho izany dia manohana ireo ezaka izay ataon'ny Federasiona Rosiana amim-pahatokiana izahay.
FANONTANIANA: Efa nahita ny bitsika nataon'ilay Okrainiana mpiara-miasa aminao ve ianao, mpitondra teny? Nibitsika izy fony izahay tao anatin'ny fampahafantarana. Mamaky tena haingana aho hoe: “Misy iraka diplaomatika 129 any Ukraine. Amin'ireo, efatra ihany no nanambara ny fialan'ny fianakavian'ny mpiasa: Etazonia, UK, Aostralia ary Alemana. Ny ambiny, anisan'izany ny EU, OSCE, COE, NATO, ary ny Firenena Mikambana, dia tsy naneho ny fikasany hanaraka ny dingana mialoha ny fotoana toy izany. " Manana valiny amin'izany ve ianao?
MR PRICE: Tsy izany.
FANONTANIANA: Renay fa izy ireo -
MR PRICE: Tsy manana valiny aho amin'izany. Ny hany fanehoan-kevitrao dia izay henonao teo aloha. Izany dia mifototra amin'ny criterion iray sy ny criterion iray ihany. Laharam-pahamehana ataonay ny fiarovana sy ny fiarovana ny mpiara-miasa aminay any Okraina.
FANONTANIANA: Okay. Manana fanontaniana Iran aho – miala tsiny.
MR PRICE: Misy zavatra hafa momba an'i Russia-Ukraine? Eny.
FANONTANIANA: Manana tohiny aho amin'ny evacuation. Avy amin'ny media Okrainiana aho —
MR PRICE: Ah, tongasoa.
FANONTANIANA: - ary tiako hazava tsara fa tsy nandao ny diplaomaty i Etazonia na dia nandritra ny andro ratsy indrindra nandritra ny valo taona farany aza. Ary i Kyiv dia lavitra ny sisintany Rosiana. Midika ve izany fa avy amin'ny fahalalanao sy ny faharanitan-tsainao, ny renivohitra – renivohitra Okrainiana no lasibatra ary io no tena lasibatry ny fananiham-bohitra Rosiana?
MR PRICE: Eny ary, mazava ho azy, tsy hiresaka amin'ny sampam-pitsikilovana aho, fa araka ny efa nambarantsika, anisan'izany ny fanambarana nataonay omaly hariva, dia manao izany ho toy ny dingana malina izahay noho ny fitohizan'ny ezaka ataon'ny Rosiana amin'ny fanakorontanana ny firenena. ary hanimba ny fiarovana ny olom-pirenena Okrainiana sy ny hafa mitsidika na monina ao Okraina.
FANONTANIANA: Ary ireo tompon'andraikitra ao Etazonia dia namerimberina nilaza – ary toy izany koa ianao – fa tsy milavo lefona amin'ny ezaka diplaomatika momba an'i Rosia ianao. Afaka manazava ve ianao azafady? Efa niresaka momba ny fiarovana ianao - fiarovana iombonana. Inona marina no tianao lazaina? Aiza no misy toerana hanaovana fifampiraharahana amin'i Rosia? Ary inona no resaka marimaritra iraisana?
MR PRICE: Noho izany dia nilaza hatrany izahay fa vonona ny handray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra sy ny diplaomasia, ary nanao fifampiresahana sy diplaomasia niaraka tamin'ny Federasiona Rosiana izahay, mazava ho azy, fa ny Rosiana dia namoaka ny fifanarahana roa. Misy singa sasantsasany ao anatin'ireo fifanarahana ireo, araka ny henonao matetika, izay tsy fanombohana mihitsy, anisan'izany ny politikan'ny OTAN antsoina hoe "Varavarana misokatra".
Saingy misy faritra hafa izay - izay ahafahan'ny fifanakalozan-kevitra sy ny diplaomasia manampy amin'ny fanatsarana ny fiarovana itambaranay, ny fiarovana transatlantika. Tiako ny manamarika fa na dia talohan'ny nanombohan'ny fananganana miaramila Rosiana teo amin'ny sisin-tanin'i Okraina aza, dia efa nanao fivoriambe roa tamin'ny Dialogue Stability Strategic izahay, ilay toerana izay nampiasain'ny Sekretera lefitra Sherman tamin'ny herinandro lasa nihaona tamin'ny mpiara-miasa aminy Rosiana hiresaka momba ny sasany amin'ireo. olana. Ary ny zava-misy fa nanomboka ilay antsoina hoe SSD taorian'ny fihaonambe teo amin'ny filoha Putin sy ny filoha Biden tamin'ny volana jona dia milaza fa mino izahay fa misy olana amin'ny fifehezana fitaovam-piadiana, ohatra, izay ahafahantsika manao fifanakalozan-kevitra mahasoa. ireo Rosiana izay afaka mamaha ny olan'ny fiarovana antsika, izany hoe ireo any Etazonia sy ireo mpiara-dia amintsika ary mpiara-miombon'antoka amintsika, ary mety hamaly ny sasany amin'ireo ahiahy izay nolazain'ny Rosiana ihany koa. Noho izany dia niresaka manokana momba ny fametrahana balafomanga any Eoropa izahay, safidy amin'ny fitaovam-piadiana nokleary stratejika sy tsy stratejika, fepetra hafa mifehy ny fitaovam-piadiana, ary ireo natao hampitomboana ny mangarahara sy ny fitoniana.
Ny hevi-dehibe amin'izany dia ny hoe ny dingana rehetra hataontsika dia tsy fanekena. Mila mifanandrify izy ireo, midika izany fa tsy maintsy manao zavatra izay hanampy amin'ny fanatsarana ny fiarovana antsika ihany koa ny Rosiana – ny filaminantsika.
Ny teboka farany amin'izany: Izany rehetra izany dia efa natao ary mbola hotanterahina miaraka amin'ny fifampidinihana lalina sy feno miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miombon'antoka amintsika, ary anisan'izany i Okraina. Rehefa nihaona tamin'ny filoha Zelenskyy ny Sekretera, rehefa nihaona tamin'ny filoha Kuleba – na ny minisitry ny Raharaham-bahiny Kuleba, raha niresaka tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Kuleba tamin'ny zoma izy taorian'ny fihaonany tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Lavrov, dia efa fanaonay ny mangarahara tanteraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka Okrainiana momba ny ny olana resahina sy ny fandrosoan'ireo fifampiraharahana ireo.
FANONTANIANA: (Tsy azo re) amin'ny resaka Palestiniana?
MR PRICE: Misy zavatra hafa momba an'i Russia-Ukraine? Ben, iray -
FANONTANIANA: Eny. Ny sekretera dia nanangana an'i Paul Whelan sy Trevor Reed tamin'ny dinika nataony tamin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Lavrov. Misy fanavaozana ve? Heverinao ve fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hanatsara ny toe-javatra misy azy ireo?
MR PRICE: Tena miankina amin'ny Federasiona Rosiana izany. Afaka manamafy aho, araka ny nolazain'ny Sekretera talohan'ny fivoriana, fa nampiakatra ny raharaha Paul Whelan sy Trevor Reed, izay samy nandeha tany Rosia ho mpizaha tany izy ireo ary notazonina tsy ara-drariny hatry ny ela loatra, dia nilaza fa izany efa ela no nahitana azy ireo niverina soa aman-tsara tany amin’ny fianakaviany. Ary hanohy hiasa amin'izany izahay.
FANONTANIANA: Misaotra anao, Ned. Iray hafa momba ny krizy Rosiana-Okrainiana. Moa ve ny fitantanan'i Biden manaiky na manaiky fa ny fidiran'i Rosia na ny fananiham-bohitra ataon'i Rosia amin'i Okraina dia mety hiteraka fiantraikany domino amin'ny olana maro? Hanome ohatra vitsivitsy aho: Shina manohitra an'i Taiwan; Iran sy ny solony; Korea Avaratra sy ny balafomanga ballistika manohitra an'i Korea Atsimo sy Japon; Venezoela, Kiobà, ary ny tetika sy ny hetsika famoretana ataon'izy ireo.
Noho izany, ry Ned, izao tontolo izao dia mijery izay hataon'i Etazonia hanakanana an'i Rosia. Ahoana ny hevitrao momba izany?
MR PRICE: Inona no ampahany farany? Ahoana no ataontsika?
FANONTANIANA: Ahoana ny hevitrao momba izany? Fantatry ny fitantanan'i Biden ve ny fitsikerana izao tontolo izao? Tahaka ny zava-nitranga tany Afganistana, ary avy eo ny tatitra sasany dia milaza fa maka pejy iray momba ny zava-nitranga tany Afganistana i Rosia ary mihetsiketsika hanohitra an'i Okraina - na mety hifindra - koa ankehitriny raha manao an'izany izy ireo dia mety hitranga avokoa izany vokatra domino izany.
MR PRICE: Eny, alohan'ny hidirana amin'ny fanontanianao midadasika kokoa, tiako ny hamaly ny ampahany farany amin'ny fanontanianao, ary i Afghanistan izany.
Sarotra amiko ny mahatakatra hoe ahoana ny fampitsaharana ny fanoloran-tena ara-tafika 20 taona izay nandanian'i Etazonia vola an'arivony tapitrisa dolara isan-taona, izay nisy miaramila amerikana an'arivony - tamin'ny fotoana iray an'aliny miaramila amerikana - napetraka; izay nisy ny fanoloran-tena nataon'ny OTAN, izay nisy miaramila OTAN an'arivony napetraka nandritra ny taona maro, namoy ny ainy, niaritra ny famoizana aina niaraka tamin'ny fanoloran-tena ara-miaramila misokatra - ahoana moa isika - raha mbola izany no zava-misy, ahoana no ho antsika. toerana stratejika tsara kokoa handraisana izay hitantsika ankehitriny avy amin'ny Federasiona Rosiana.
Nazava ny filoha raha nanao ny fanambarany fa hampitsahatra ny firotsahanay ara-tafika any Afganistana izahay, izany no anisan'ny antony nanaovanay izany dia tsy ny hanakanana taranaka amerikanina na mpikambana ao amin'ny OTAN tsy hiady fotsiny. ary mety ho faty any Afghanistan, fa hamela antsika hifantoka amin'ny fandrahonana sy ny fahafahan'ny taonjato faha-21. Ary noho izany rehefa miatrika an'ity herisetra Rosiana ity izahay, rehefa mikatsaka ny hirotsaka amin'ity lalan'ny fiarovan-tena sy ny fisakanana ity, dia izany indrindra no ataonay.
Ka te hiresaka momba an'i Afghanistan fotsiny aho.
FANONTANIANA: Fa ry Ned, heveriko fa ny fitantanan-draharaha (tsy azo henoina) dia niverin-dalana tamin'ireo mpiara-dia aminy tao, maro ny olona nahita izany; mety manahy ny mpiara-dia amin'izay mety hitranga izao.
MR PRICE: Voalohany indrindra, tsy nandao an'i Afghanistan i Etazonia. Nahita anay niara-niasa sy naneho ny fanoloran-tenanay maharitra ho an'ny vahoakan'i Afghanistan izahay, ary nanao izany tamin'ny fomba maro izahay. Tsy mila mandalo azy ireo aho amin'izao fotoana izao satria mijery izany tsy tapaka izahay.
Noho izany, na iza na iza mandray lesona afa-tsy ny nahatsapan'i Etazonia fa tonga ny fotoana hampitsaharana ny fanoloran-tena ara-miaramila misokatra izay nisy miaramila amerikana an'arivony niady ary an'arivony no maty, ary toy izany koa. ho an'ny OTAN ihany koa, nandrombaka an'i Etazonia sy ireo mpiara-miombon'antoka ao amin'ny OTAN an'arivony tapitrisa tapitrisa – an'arivony tapitrisa nandritra ny 20 taona; na iza na iza handray lesona avy amin'izany afa-tsy ny hoe i Etazonia dia mametraka ny tenany handray ny fandrahonana sy ny fahafahana atrehintsika ankehitriny, raha mbola manohy miara-miasa sy manohana ny vahoakan'i Afganistana isika, dia mety ho famakafakana diso izany.
Fa amin'ny fanontanianao anefa dia efa nieritreritra an'izany izahay. Ary izany indrindra no antony nanaovan'ny Sekretera lahateny tany Berlin tamin'ny herinandro lasa izay tena niompana tamin'io fanontaniana io, mba hanasongadinana fa zava-dehibe amin'ny zony manokana ny zavatra hitantsika amin'ny fandraisan'i Rosia an'i Okraina azy, mazava ho azy. Okraina dia mpiara-miasa akaiky; manana namana akaiky amin'ny vahoaka Okrainiana izahay. Saingy amin'ny lafiny sasany, manan-danja tahaka an'i Okraina izany, na dia lehibe kokoa noho ny resaka fifandirana, fifandirana vokarin'i Rosia, eo amin'i Rosia sy Okraina. Izany dia momba izay tokony ho fitsipika tsy azo tsinontsinoavina amin'ny antsoina hoe lamina iraisam-pirenena mifototra amin'ny fitsipika, inona no tokony ho fitsipika tsy azo tsinontsinoavina izay nandritra ny 70 taona lasa, hatramin'ny nifaranan'ny Ady Lehibe Faharoa, dia niaro sy namela ambaratongam-piarovana mbola tsy nisy toy izany. , ny fitoniana, ny fanambinana. Tafiditra ao anatin'izany ny - any Eorôpa, fa tafiditra ao anatin'izany koa any amin'ny faritra mihoatra lavitra noho izany.
Ary mazava ho azy, henonao izahay miresaka momba ny lamina iraisam-pirenena mifototra amin'ny fitsipika, tsy amin'ny raharaha Eorôpa sy izay ataon'i Rosia hanimbana azy, fa any amin'ny faritra hafa koa, indrindra fa ny Indo-Pasifika, izay ahianay ny olana mitovy amin'izany. ny firenena sasany koa dia nitady hanao izay hanimba, hanimba ny filaminam-pirenena mifototra amin'ny fitsipika. Noho izany dia tsy very amintsika fa ny Rosiana sy ny fiantraikan'ny zavatra ataony, na dia manan-danja ho an'i Okraina aza, dia mihoatra lavitra an'i Okraina.
FANONTANIANA: Ned, manana fanontaniana roa momba an'i Iran sy Koety aho.
FANONTANIANA: Ned, afaka manontany aho -
MR PRICE: Azo antoka fa hiverina aminao aho. Hoy.
FANONTANIANA: Intelo na indroa no niantsoanao ahy.
MR PRICE: Hoy ianao, efa nanontany a -
FANONTANIANA: Tsy maninona. Tsia, azoko.
MR PRICE: Efa nametraka fanontaniana ianao nandritra ity fampahafantarana ity.
FANONTANIANA: Azoko. Te hanova lohahevitra anefa aho. Te-hanontany anao aho momba ilay Palestiniana-Amerikana maty teo am-ponja Israeliana tamin'ny 12 Janoary. Ankehitriny, fantatro fa niantso ny Israeliana ianao fa te hahita ny zava-misy sy ny sisa. Voalohany indrindra, namaly anao ve izy ireo? Ny tiako holazaina dia mety ho iray amin'ireo rahalahiko izany.
MR PRICE: Miala tsiny fa inona ny ampahany farany?
FANONTANIANA: Ny tiako holazaina dia mety ho izany - tsy maninona. Ny lazaiko fotsiny dia namaly anao ve ry zareo?
MR PRICE: Noho izany dia tsy mbola nahita tatitra farany avy amin'ny Governemanta Israeliana isika. Manohy ny fanohanana ny fanadihadiana lalina momba ny toe-javatra niseho. Faly izahay mandray vaovao fanampiny avy amin'ny Governemanta Israeliana haingana araka izay azo atao. Manahy mafy izahay amin'ny tatitry ny fampitam-baovao momba ny toe-javatra manodidina ny fahafatesan'Andriamatoa Assad, teratany Amerikana, izay hita faty taorian'ny nitazomana azy ny miaramila Israeliana. Araka ny efa nambaranay teo aloha dia nifandray akaiky tamin’ny fianakaviany izahay mba haneho ny fiaraha-miory aminay, amin’ny fanomezana serivisy kaonsily. Nisy solontena ihany koa izahay taorian'ny nahafatesan'Atoa Assad.
FANONTANIANA: Eny ary, maty teo am-pototry ny rojo vy sy ny vava ary ny sisa. Ary karazana - inona izy ireo - omenao fe-potoana? Matoky ny Israeliana ve ianao fa hanao ny fanadihadiana azy manokana momba ity raharaha ity?
MR PRICE: Araka ny nolazaiko, Said, dia raisinay haingana ny fandraisana izany vaovao izany.
FANONTANIANA: Okay. Manana fanontaniana iray hafa haingana aho. Misy ny tatitra fa 17 ny mpanao gazety Palestiniana nogadraina androany. Moa ve izany zavatra ho entinao miaraka amin'ny Isiraelita mba hijerena ny zava-misy amin'ny fanagadrana azy ireo?
MR PRICE: Fantatray ny tatitra notononinao. Tahaka ny ataonay manerana izao tontolo izao, manohana mpanao gazety tsy miankina sy fikambanana media izahay, ary efa naheno anay niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fitateram-baovaon'izy ireo ianao, indrindra any amin'ireo faritra misy fifandirana na mety hipoitra. Mino izahay fa ny fanajana ny zon'olombelona, ​​ny fahalalahana fototra ary ny fiarahamonim-pirenena matanjaka dia tena zava-dehibe amin'ny fitantanana tompon'andraikitra sy mandray andraikitra.
FANONTANIANA: Ary farany, ny Masoivohon'i Etazonia ao amin'ny Firenena Mikambana tamin'ny herinandro lasa dia niresaka sy nanasongadina ny herisetra sy ny herisetra ataon'ny mpanjanaka amin'ny Palestiniana. Saingy tsy hita afa-tsy ny fitomboan'ny herisetra tato anatin'ny andro vitsivitsy. Moa ve izany zavatra ho atsanganao izany sa sahirana loatra amin'ny olana toa an'i Okraina sy Iran sy ireo zavatra rehetra ireo ianao - ny tiako holazaina dia mazava ho azy?
MR PRICE: Nilaza izy fa governemanta lehibe isika. Sampana lehibe izahay. Tsy mampiasa metafora be loatra, fa afaka mandeha sy mitsako siligaoma miaraka. Raha ny momba ilay olana navoakanao dia efa naheno anay niresaka momba izany ianao. Nanonona fanehoan-kevitra vitsivitsy ianao vao haingana. Efa naneho hevitra momba izany ihany koa ny Departemantam-panjakana. Mino izahay fa zava-dehibe ho an'ny antoko rehetra ny miala amin'ny dingana izay mampitombo ny fihenjanana sy mampihena ny ezaka hampandrosoana ny fifampiraharahana vahaolana ho an'ny fanjakana roa. Tafiditra ao anatin'izany ny herisetra atao amin'ny sivily sy ny herisetra amin'ny mponina.
FANONTANIANA: Ned, afaka manontany zavatra momba an'i Iran (tsy heno) ve aho?
MR PRICE: Noho izany fanontaniana roa Iran. Azo antoka.
FANONTANIANA: Eny. Ny minisitry ny raharaham-bahiny Iran tamin'ny alatsinainy dia nilaza fa vonona ny handinika ny fifampiresahana mivantana amin'i Etazonia izy ireo raha toa ka izany – raha mahatsapa izy ireo fa afaka mahazo antoka tsara. Na izany na tsy izany, efa nisy ve ny fifampiresahana momba izany? Ary mieritreritra ny hiresaka mivantana amin'izy ireo ve ianareo?
MR PRICE: Humeyra, araka ny fantatrao, vonona ny hihaona mivantana izahay. Nitazona hatrany ny toerana izahay fa hahavokatra kokoa ny fiarahana mivantana amin'i Iran amin'ny fifampiraharahana amin'ny JCPOA sy amin'ny olana hafa. Miitatra amin'ny endrika bilateral sy multilateral izany. Ny fihaonana mivantana dia ahafahan'ny fifandraisana mahomby kokoa, izay ilaina maika mba hahazoana fahatakarana haingana momba ny fiverenana amin'ny fanarahana ny JCPOA.
Efa nanao an'io hevitra io izahay teo aloha, fa raha jerena ny hafainganam-pandehan'ny fandrosoana nokleary ao Iran, dia tena fohy ny fotoana mandra-pahatongan'ny tombontsoa tsy miparitaka izay nampitain'ny JCPOA tamin'ny voalohany nandrafetana sy nampiharina tamin'ny - novolavolaina tamin'ny taona 2015 ary nampiharina tamin'ny 2016 dia mihoatra noho ny fandrosoana nokleary. izay nataon'i Iran. Noho izany dia mikatsaka ny hanatanteraka io diplaomasia io haingana izahay, ary mazava tsara hatrany fa ny fahafahana mandray anjara mivantana dia hahatanteraka ireo tanjona ireo.
FANONTANIANA: Raha jerena ny toerana misy anao izao sy izay nolazain'izy ireo, tokony hanantena ve isika fa hitranga tsy ho ela izany? Misy antony ve mety hitranga tsy ho ela izany? Efa nisy ve ny fifampiresahana ankolaka momba ny fanatanterahana izany tsy ho ela?
MR PRICE: Tsy maintsy manontany ny tompon'andraikitra ao Tehran ianao. Izahay – tsy vao sambany no nanao an'io hevitra io. Noraisinay tsy tapaka izany hevitra izany hatramin'izao. Nanantitrantitra ny amin'ny endrika ankolaka any Vienne ny Iraniana. Efa hatry ny ela no nanamarika fa sakana ny resaka ankolaka, indrindra mikasika ity olana sarotra sy manan-danja ity. Nazava àry ny toerana misy anay. Hitondra anao any amin'ny manampahefana ao Iran aho.
FANONTANIANA: Ny zavatra farany momba izany. Nanao resadresaka nifanaovana tamin'ny Iraka manokana Malley izahay omaly, izay nilaza fa sarotra ho an'i Etazonia ny hanao fifanarahana amin'i Iran raha tsy avoaka ireo takalon'aina amerikana. Te-hanosika anao kely fotsiny aho amin'ny antony tsy ahafahan'ny fitondrana milaza mivantana fa tsy hiditra ao amin'ny JCPOA izy ireo raha tsy avoaka ny olom-pirenena amerikana.
MR PRICE: Eny, ny zavatra nolazain'ny Iraka manokana dia hoe, "sarotra ho antsika ny maka sary an-tsaina ny fiverenana amin'ny fifanarahana nokleary raha misy Amerikana efatra tsy manan-tsiny notazonin'i Iran takalon'aina."
MR PRICE: Hevitra efa naverimberiny teo aloha izany, ka izao – tsy tokony ho vaovao. Izany ihany koa, azoko lazaina aminareo, dia tsy vaovao amin'ny Iraniana. Efa naheno an-kolaka taminay koa izy ireo taloha.
Saingy nanamarika ihany koa ny iraka manokana fa ireo olana ireo dia miasa amin'ny lalamby samihafa, ary mandeha amin'ny lalana samihafa izy ireo noho ny antony tsotra: Ny fiverenana amin'ny fanarahan-dalàna amin'ny JCPOA dia soso-kevitra tsy azo antoka. Tianay ny hahita ireo Amerikana izay nohazonina tsy araka ny sitrapony nandritra ny taona maro, lavitra ny fianakaviany, niverina haingana. Tsy hahatanteraka ny tanjontsika, tsy hahasoa ny tombontsoany, ny hamatotra ny anjarany amin'ny tolo-kevitra izay nolazaiko teo aloha fa tsy azo antoka indrindra. Noho izany dia azo antoka fa mandoko ny fifaneraserantsika izy ireo, fa ireo dia miasa amin'ny lalana samihafa.
FANONTANIANA: Afaka mametraka fanontaniana ve aho?
FANONTANIANA: Saingy i Ned, ny fomba ilazanao azy, dia toa izany - tena toy ny fepetra mialoha izany.
MR PRICE: Averina indray, tsy ny hoe misy fifamatorana mivantana na mazava tsara satria ny fiverenana amin'ny fanarahan-dalàna amin'ny JCPOA dia soso-kevitra tsy azo antoka. Tianay ny fiverenan'ireo Amerikana ireo ho soso-kevitra manokana, ary noho izany dia ataonay misaraka ireo olana ireo.
Eny. Miala tsiny.
FANONTANIANA: Nitsidika an'i Beirota ny minisitry ny raharaham-bahiny Koety ny asabotsy teo ary nanolotra tolo-kevitra fananganana fahatokisana ho an'i Libanona ary hafatra nifandrindra tamin'ireo firenena ao amin'ny Golfa, ary mitsidika an'i Washington izy amin'ity herinandro ity. Fantatrao ve ny soso-kevitra? Ary misy fifandraisana ve eo amin'ny fitsidihany any Beirota sy Washington?
MR PRICE: Eny, manantena aho rehefa mihaona amin'ny mpiara-miasa aminy Koetiana ny sekretera amin'ny alarobia fa hanana fotoana hiresaka momba an'i Libanona izy ireo. Zavatra izay i Etazonia, miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay – ao anatin'izany ireo mpiara-miombon'antoka aminay any amin'ny Golfa, Frantsay, sy ny hafa – no tena nifantohanay. Noho izany dia heveriko fa mbola hisy zavatra holazaina amin’ny tohin’ny fihaonan’ny roa tonta amin’ny alarobia izao.
FANONTANIANA: (Tsy azo henoina) ho an'ny mpiara-miasa aminay Tracy Wilkinson ao Honduras. Ireo ankolafy mpifanandrina ao amin'ny kaongresy dia mety handrava ny fitokanana ny filoha vaovao ny alakamisy, izay noraisin'ny Departemantam-panjakana haingana. Ny filoha lefitra Harris dia voalahatra handeha amin'ny fitokanana. Moa ve ny Etazonia manao zavatra hanalefahana an'io krizy io?
MR PRICE: Eny, ny holazaiko dia ny fisafidianana ny vonjimaika vaovao mpitarika ao amin'ny Kongresy Nasionaly Honduras dia fanapahan-kevitra marin'i Honduras. Tsy andrintsika ny hampitombo ny asantsika miaraka amin'ny fitantanan'i Castro ho avy sy ny Hondurans avy amin'ny sehatra politika mba hampandrosoana ny tombontsoantsika. Manao antso avo amin’ireo mpisehatra politika izahay mba ho tony, hifampiresaka, hifady ny herisetra sy ny kabary fihantsiana, ary manentana ny mpanohana azy mba haneho hevitra am-pilaminana sady manaja ny fanjakana tan-dalàna.
Araka ny fantatra dia efa nanana fahafahana nifandray tamin'ny filoha voafidy Castro ny filoha lefitra Harris mba hiarahaba azy noho ny fandreseny manan-tantara amin'ny maha-filohan'ny vehivavy voalohany an'i Honduras azy. Tao anatin'io resaka io tamin'ny volana lasa teo dia nifanakalo hevitra momba ny fahalianan'izy ireo niara-niasa izy ireo mba hamahana ny fototry ny fifindra-monina, hampiroborobo ny fahafahana ara-toekarena ho an'ny vahoakan'i Honduras, hanatsara - hiadiana amin'ny kolikoly, hampihenana ny fandrahonana amin'ny fiarovana, ary hanatsara ny fidirana amin'ny fahasalamana. ary fanabeazana.
FANONTANIANA: Iray amin'i Torkia ho an'ny mpiara-miasa amiko VOA.
MR PRICE: Azo antoka. Misy ve ianao - nisy fanaraha-maso ve, Conor?
FANONTANIANA: Tsia, fanontaniana hafa izany, koa mandehana, Barbara.
FANONTANIANA: Ka raha tsy mampaninona anao, nanontany tena ilay – mpiara-miasa amiko ao amin'ny VOA raha misy ny fanehoan-kevitra avy amin'ny Departemantam-panjakana manoloana tranga roa mikasika ny famerana ny fahalalahana maneho hevitra ao Tiorkia. Ny iray dia ny asabotsy lasa teo: mpanao gazety tiorka malaza iray no nigadra noho ny faniratsirana ny filoha Erdogan. Androany ny sampan-draharaham-panjakana – nandoa lamandy ny fahitalavitra iasany ny fanjakana. Ny tranga faharoa dia mpihira malaza iray izay mahazo fandrahonana avy amin'ny Islamista sy ny vondrona nasionalista noho ny zavatra nosoratany vao haingana, ary ny filoha Erdogan dia nandrahona ny hampanginana azy nandritra ny vavaka zoma, nilaza hoe: "Adidintsika ny manapaka ireo lela ireo," un-quote.
Misy fanehoan-kevitra momba ireo tranga ireo ve ianao?
MR PRICE: Eny, mihatra any Tiorkia izany saingy manerana izao rehetra izao ihany koa amin'ny fampiharana azy, ary izany no inoanay fa manamafy ny demokrasia ny fahalalahana maneho hevitra ary mila arovana izany na dia misy fitenenana aza mety ho hitan'ny sasany mampiady hevitra na tsy mahazo aina ny sasany. Fantatray ary diso fanantenana izahay noho ny fiheverana ary ny fisamborana an'i Sedef Kabaş, iray amin'ireo tranga notononinao, ary ireo fitsipika ireo dia mihatra amin'i Torkia tahaka ny any amin'ny firenena hafa rehetra.
FANONTANIANA: Burkina Faso. Niakatra tao amin'ny fahitalavitra ny miaramila nanambara fa izy ireo no eo amin'ny fitondrana. Nandà izany ny biraon’ny filoha, saingy tsy hita ny filoha. Fantatrao ve ny zava-mitranga? Misy fanonganam-panjakana ve? Efa nanomboka nanao tombana ve ianao raha misy na tsia?
MR PRICE: Eny ary, fantatsika ny tatitra fa ny filohan'i Burkina Faso dia notanan'ny miaramilan'ny firenena. Ny ekipan'ny masoivohontsika any Ouagadougou dia manara-maso ny zava-misy ary mitazona fifandraisana amin'ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena ary koa amin'ireo manampahefana ao amin'ny governemantan'ny filoha Kaboré. Miantso ny famotsorana tsy misy hatak'andro ny Filoha Kaboré sy ireo manampahefana hafa ao amin'ny governemanta izahay, ary ireo mpikambana ao amin'ny mpitandro ny filaminana hanaja ny lalàm-panorenan'i Burkina Faso sy ny fitarihana sivily. Manentana ny andaniny sy ny ankilany ao anatin’izao toe-draharaha mivaingana izao mba ho tony sy hikatsaka fifampiresahana ho fomba hamahana ny fitarainana. Izahay – ny masoivohonay any Ouagadougou dia nanoro hevitra ny olom-pirenena amerikanina ao Burkina Faso fa misy ny tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny manampahefana ao an-toerana ary ny olom-pirenena amerikana dia manoro hevitra mba hialokaloka, hialana amin'ny vahoaka marobe, ary hanara-maso ny fampitam-baovao eo an-toerana mba hahazoana vaovao.
FANONTANIANA: Manome fanampiana be dia be ho an'i Burkina Faso i Etazonia. Manao tombana fanonganam-panjakana ve ianao?
MR PRICE: Izany dia toe-javatra mivoatra. Toe-javatra mbola mivaingana izany. Nitohy ny fivoarana na dia tao anatin'ny ora vitsivitsy aza, noho izany dia tsy ho ela ny hamaritana, farafaharatsiny amin'ny fomba ofisialy, ny toetry ny fivoarana mitohy. Nanao antso avo ho an’ny mpisehatra rehetra izahay rehefa mandinika tsara ny zava-nitranga teny an-toerana mba hahitana izay mety ho fiatraikany amin’ny fanampianay.
FANONTANIANA: Iran, fanaraha-maso haingana be. Notaterin'ny AFP fotsiny fa - dia nomena ireo manampahefana amerikana ambony milaza fa te hahita fifampiresahana mivantana amin'i Iran izy ireo. Afaka manamarina izany ve ianao? Te hiresaka mivantana amin'i Iran ve ianao amin'ny —
MR PRICE: Noheveriko fa vao dimy minitra no niresahan'i Humeyra an'io.
FANONTANIANA: Miala tsiny.
MR PRICE: Ya. Manao izany izahay.
FANONTANIANA: Tsy maintsy nalahelo aho. Okay, miala tsiny.
MR PRICE: Eny. Eny.
FANONTANIANA: Ka inona no antenaina ho tratra amin'ny resaka mivantana fa tsy ny zava-mitranga any Vienne ankehitriny?
MR PRICE: Eny, nisy fifanakalozam-baovao lava be momba an'io, ka hanoro anao amin'izany aho.
Fanontaniana farany roa. Eny, azafady? Eny?
FANONTANIANA: Misy fanavaozam-baovao azonao omena ve momba ny fanagadrana ISIS any avaratr'i Syria, na eo amin'ny lafiny fanohanan'ny fiaraha-mitantana sy ny isan'ireo afa-nandositra? Ary inona no – inona no lazainy momba ny fahafahan'ny SDF miantoka ny trano, ary hitanao ho toy ny tsy fahombiazan'ny fitsikilovana avy amin'ny fiaraha-mitantana ve izany?
MR PRICE: Eny, araka ny hitanao angamba, namoaka fanambarana momba izany izahay tamin'ny faran'ny herinandro, ary nanameloka ny fanafihan'ny ISIS tamin'ny herinandro lasa teo amin'ny toby fitazonana an'i Hasakah any avaratra atsinanan'i Syria, izay fantatray fa fikasana hanafaka ireo mpiady ISIS nogadraina. Midera ny SDF izahay noho ny valiny haingana sy ny fanoloran-tenany amin'ny ady amin'ny ISIS, ary io fanafihana ao an-tsainay io dia manasongadina ny maha-zava-dehibe sy ny filana ny famatsiam-bola feno ny Global Coalition mba handresena ny hetsika ataon'ny ISIS mba hanatsarana sy hiarovana ny fanagadrana ny mpiady ISIS, ao anatin'izany ny fanamafisana ny fiarovana ny toeram-ponja.
Aminay ihany koa dia manasongadina ny filana maika ny firenena niaviany hamerenana an-tanindrazana, hanarenana, hamerenana, ary hanenjika – raha mety – ireo teratany voatazona any avaratra atsinanan'i Syria. Mitoetra ho manolo-tena amin'ny faharesen'ny ISIS maneran-tany izahay, miasa amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa sy ny mpiara-miombon'antoka eto an-toerana. Fa ankoatr'izay, ho an'ny fivoarana tetika eny an-kianja dia mila manondro anao amin'ny DOD aho.
FANONTANIANA: Omaly alina, nilaza ny Departemantam-panjakana fa raha misy ny fanafihana an'i Okraina, dia tsy ho afaka handroaka ny olom-pireneny i Etazonia. Nanontany tena aho raha azonao hazavaina fotsiny hoe nahoana, nahoana izany.
MR PRICE: Ben, izany - izany no zava-misy ara-tantara hatramin'izay. Ny - ny andraikitray voalohany dia ny manome fanavaozana sy fivoarana ary miantoka ny fifandraisana amin'ny vondrom-piarahamonina tsy miankina Amerikana any amin'ny firenena rehetra, ao anatin'izany ny rehefa manao zavatra toy ny fiaingana voadidy na fiaingana nahazoana alalana izahay. Fantatro fa ny zava-niainana vao haingana momba an'i Afghanistan dia mety handoko ny fahatsapana ananan'ny olona sasany momba izany, saingy i Afghanistan, noho ny antony izay fantatsika tsara, dia miavaka. Zavatra tsy mbola nataon’ny Governemantan’i Etazonia izany teo aloha.
Ary araka ny efa nahenoanao anay teo amin'ny tontolon'ny Etiopia, Okraina, ary ny firenena hafa, ny andraikitray dia ny hanohy hanome vaovao vaovao ho an'ny vondrom-piarahamonina Amerikana, hanome tolotra ho azy ireo, ao anatin'izany ny fampindramam-bola ho an'ny fampodiana an-tanindrazana raha toa ka ilainy ny hahazoany tombony ara-barotra. safidy. Ireo safidy ara-barotra ireo, mazava ho azy, dia mbola misy amin'ny raharaha Okraina. Izany no nahatonga ny toro-hevitra omaly alina nanentana ny Amerikanina hihevitra ny hampiasa ireo safidy ara-barotra ireo, ary ny masoivoho dia vonona hanampy amin'ireo ezaka ireo.
FANONTANIANA: Misaotra anao, Ned.
More on: Korea Avaratra | Ukraine | Shina | Vienna | Israeliana | Beirut | Rosia | Arabia Saodita | Aostralia | Kyiv | Vaomiera Eoropeana | Yemen | Estonia | Germany | Geneva | governemanta | Paris | firenena Mikambana | Vladimir Putin | masoivoho | Fanafihana Rosiana | Etazonia | trano Fotsy | Eoropa | Libanona | Rosiana | vorontsiloza | Korea | Berlin | OTAN | Emirà Arabo Mitambatra | Iran | Afghanistan | ady
Lufthansa izao dia mampiditra safidy manidina tsy misy karbônina amin'ny famandrihana Eoropa, Germany|
Ny Carnival Cruise Line dia mamakivaky ny seranan-tsambo vaovao ao amin'ny Nosy Grand Bahama governemanta|
Lohahevitra voalohany natao tamin'ny fitsapana ho an'ny fanaintainan'ny lohalika OA Aostralia, Etazonia|
AfghanistanmasoivohoAostraliaBeirutBerlinShinaEstoniaEoropaVaomiera EoropeanaGenevaGermanygovernemantaIranIsraelianaKoreaKyivLibanonaOTANKorea AvaratraParisRosiaFanafihana RosianaRosianaArabia SaoditavorontsilozaUkraineEmirà Arabo Mitambatrafirenena MikambanaEtazoniaViennaVladimir Putinadytrano FotsyYemen
Previous Filohan'ny Tambajotran'ny Fizahantany Vaovao Manerantany momba ny Fifandraisan'ny Governemanta
Manaraka Nanakatona ny seranam-piaramanidina Istanbul ny orampanala be dia be